राजनीति – Page 13 – SidhaRekha
२०७४ भाद्र ६, मंगलवार १९:४७२०७४ भाद्र ६, मंगलवार १९:४७२०७४ भाद्र ६, मंगलवार १९:४७ by Sidharekha Online
बैतडी क्षेत्र नं २ का सांसद चन्द वाणिज्य राज्य-मन्त्रीमा नियुक्त
बैतडी, ६ भदौ । बैतडी क्षेत्र नं २ बाट निर्बाचित सांसद नरबहादुर चन्द वाणिज्य राज्य-मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । आज मंगलबार गरिएको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा चन्द वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । २०१९ साल भदौ १३ गते बुवा गौरी चन्द र आमा गौरा चन्दको कोखबाट जन्मेका चन्दले २०४४ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर राजनीति शुरु गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापन बिषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातोकोत्तर गरेका राज्यमन्त्री चन्दले विरेन्द्र मावि शाहीलेकबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो । २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सचिव रहेकै बेला उहाँ जिल्ला विकास समितिको सभापति समेत बन्नुभएको थियो । चन्द २०६७ सालमा नेपाली कांग्रेस बैतडीको सभापति समेत बन्नु भएको थियो । २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं २ बाट विजयी भएका चन्दले पहिलो पटक राज्यमन्त्री बन्ने अवस
२०७४ भाद्र ५, सोमबार २०:४३२०७४ भाद्र ५, सोमबार २०:४३२०७४ भाद्र ५, सोमबार २०:४३ by Sidharekha Online
काठमाडौं, ०५ भदौ । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्‍मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत नपुग्दा संविधान संशोधनको प्रयास असफल भएको हो। सोमबार बेलुका भएको मतविभाजनमा प्रस्तावको पक्षमा ३४७ र विपक्षमा २०६ मत प्राप्त भएको थियो । प्रस्ताव पारित हुन कम्तिमा पनि ३९५ मत आवश्यक पर्थ्यो । नेकपा एमाले, राप्रपा, नेमकिपा, राजमोलगायतका राजनीतिक दल प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रस्तावको पक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपालगायत साना दल पक्षमा थिए । उक्त संख्या तत्काल कायम रहेको ५९२ को दुई तिहाई मत नभएकाले अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुख ओनसरी घर्तीले गरेकी थिइन् । विपक्षमा एमाले, राप्रपाका २०६ जना सांसदले मतदान गरे। संविधान संशोधनमाथि मतदान हुँदा संसदमा उपस्थित कोही पनि तटस्थ बसेका थिएनन्। संसदको अर्को बैठक भ
२०७४ भाद्र ४, आईतवार ०८:०१२०७४ भाद्र ४, आईतवार ०८:०१२०७४ भाद्र ४, आईतवार ०८:०१ by Sidharekha Online
संविधान संशाेधनमा बृहत् छलफल हुँदै, साेमबार मतदान हुने
काठमाडौं, ४ भदौ । लामाे समयदेखि थाती रहेकाे संविधान संशोधन विधेयक अब प्रक्रियागत रूपमै अघि बढेकाे छ । विधेयकमाथिको बृहत् छलफल संसदमा आइतबार दिनभरि हुँदैछ । गत बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावमाथि परेका ५० संशोधनमध्ये एक संशोधनकर्ताले बोलिसकेकाे र बाँकी ४९ संशोधनकर्ताले अाइतबार अाफ्नाे धारणा राख्दैछन् । अाइतबार संशाेधनकर्ता सांसदबाहेक इच्छुक अन्य सांसदले समेत बोल्न समय पाउने भएकाले अाजै मतदान सुरू हुने संकेत छैन । सोमबार मात्र विधेयक पारितका लागि मतदान हुने बताइएकाे छ । के के छन् विधेयकमा ? राष्ट्रिय सभासम्बन्धी व्यवस्था संशाेधन गर्ने बुँदा विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभामा पहिले सातवटै प्रदेश प्रत्येकबाट आठजनाको दरले प्रतिनिधित्व र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेकाेमा संशोधनमा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा सात प्रदेशबाट पाँचजनाका दर
२०७४ भाद्र २, शुक्रबार १५:२७२०७४ भाद्र २, शुक्रबार १५:२७२०७४ भाद्र २, शुक्रबार १५:२७ by Sidharekha Online
प्रदेश र केन्द्रको चुनाव मङ्सिर ४ र २१ मा एकैपटक गर्ने तयारी
काठमाडौं, भदौ २ । निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार साँझ आयोजना गरेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु र आयोगका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि निर्वाचन आयोग दुवै चुनाव एकैचरणमा गर्न सहमत भएको हो । निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरुबीच मंसिर ४ गते हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३१ जिल्ला तथा २१ गते बाँकी जिल्लामा चुनाव गर्ने सहमती भएको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतपत्रबारे दुईवटा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, दलका उम्मेदवारलाई दिइने प्रत्यक्ष मतलाई दलको समानुपातिक मतका रूपमा गणना गर्ने र दोस्रोमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने उल्लेख छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित, एमाले
२०७४ भाद्र १, बिहीबार १०:१२२०७४ भाद्र १, बिहीबार १०:१२२०७४ भाद्र १, बिहीबार १०:१२ by Sidharekha Online
प्रदेश नं. २ मा लागु भयाे निर्वाचन अाचारसंहिता
तर, उम्मेदवारलाई भदौ २१ गतेदेखि मात्र लाग्ने
काठमाडाैं, १ भदाै । अागामी असाेज २ गते हुने प्रदेश नं. २ काे स्थानीय तहकाे निर्वाचनका लागि आजैदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाे छ । निर्वाचन आयोगको पूर्व सूचनाअनुसार आचारसंहिता आजदेखि लागू भएको हो। अायाेगका अनुसार, आचारसंहिता अवधिभरमा निर्वाचन, निर्वाचन प्रक्रिया र मतादातालाई प्रभावित पार्ने काम गर्न पाइदैन। तर अाजदेखि लागु भएकाे आचारसंहिता नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु, सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मात्र लागू हुनेछ। यस्तै, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी र कार्यालय, सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ। साथै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्थालाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ। तर राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलार्इ भने याे अ
२०७४ श्रावण २६, बिहीबार १८:०५२०७४ श्रावण २६, बिहीबार १८:०५२०७४ श्रावण २६, बिहीबार १८:०५ by Sidharekha Online
माओवादी सकियो, केन्द्रमात्रै बाँकी : ओली
काठमाडौं, २६ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी पार्टीमा अब केही पनि बाँकी नरहेको र केन्द्रमात्रै बाँकी रहेको बताएका छन् । ‘अब माओवादीमा जे छ, केन्द्रमात्रै छ, अरु केही पनि बाँकी छैन, माओवादी केन्द्र !’ विहीबार धुम्बाराहीस्थित एमाले मुख्यालयमा माओवादीका केही कार्यकर्ताहरुलाई एमालेमा प्रवेश गराउँदै ओलीले भने-‘तपाईहरुले अलिकति हल्लाइदिनुभयो, अब एकपल्ट हल्लाइदिने हो भने माओवादी सकिन्छ ।’ रुखमा पात अडिनका लागि जीवन आवश्यक पर्ने भन्दै ओलीले माओवादीभित्र जीवन नरहेकाले अब पातहरु झर्दै जाने बताए । माओवादी पार्टीमा ०५५ सालदेखि एउटै नेताको जमिन्दारी चलेको ओलीले बताए । माओवादी छाडेर एमालेमा आएका सिराहातिरका केही माओवादी कार्यकर्तालाई ओलीले भने- ‘त्यहाँ आजीवन एउटै नेता हुन्छन्, पीए पनि आफ्नैलाई बनाउँछन्, उम्मेदवार पनि आफ्नैलाई बनाउँछन्, तपाईहरु अहिलेसम्म कसरी बस्नुभयो हो
२०७४ जेष्ठ २७, शनिबार २१:४६२०७४ जेष्ठ २७, शनिबार २१:४६२०७४ जेष्ठ २७, शनिबार २१:४६ by Sidharekha Online
चुनावमा सहभागी नहुने राजपाको घोषणा
काठमाडौं, २७ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले आगामी असार १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ । राजपाले चुनाव सार्न राखेको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि सो पार्टीले चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो । राजपाका नेतालाई मनाउने अन्तिम प्रयास स्वरुप शनिवार साँझ र आइतवार पनि पुन छलफल गर्ने समझदारी भएको एक नेताले बताएका छन् ।
२०७३ फाल्गुन ६, शुक्रबार ०९:२८२०७३ फाल्गुन ६, शुक्रबार ०९:२८२०७३ फाल्गुन ६, शुक्रबार ०९:२८ by Sidharekha Online
बैतडी, ६ फागुन । नेकपा एमाले निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले यही फागुन १८ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । २८ वर्षे उमेरहदसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुने स्ववियुको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरिएको पार्टीबाट पाटन बहुमुखी क्याम्पस हेर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएका नेकपा एमाले बैतडी काठमाडौं सम्पर्क मन्च का सचिब, पाटन संयोजक लोकेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा प्रारम्भिक कमिटिको तर्फबाट महेश प्रसाद भट्ट – सभापति, यसोदा चन्द - सचिब, डम्बर दत्त भट्ट - कोषाध्यक्ष, सदस्यहरु सचिन भण्डारी, किरन चन्द, पुजा थलाल, दुर्गा कुमारी बिष्ट र ४ जना बन्दसुची मा गरि ११ जना को उम्मेद्बारी दर्ता गरिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो
२०७३ भाद्र २, बिहीबार १४:१२२०७३ भाद्र २, बिहीबार १४:१२२०७३ भाद्र २, बिहीबार १४:१२ by Sidharekha Online
नेविसंघ अध्यक्षमा नैनसिंह महर विजयी
काठमाडौ, २ भदौ । नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा नैनसिंह महर विजयी भएका छन् । महर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी मनोनमणि आचार्यलाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। आचार्य वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट अध्यक्षका प्रत्याशी थिए भने विजयी महर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट उम्मेदवार बनेका थिए । निर्वाचित महरले १४९६ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी आचार्यले १३३२ मत प्राप्त गरेका छन् । महामन्त्रीमा महर प्यानलकै कुन्दन काफ्ले विजयी भएका छन् । मत परिणामको औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ ।
२०७३ भाद्र १, बुधबार ०९:०२२०७३ भाद्र १, बुधबार ०९:०२२०७३ भाद्र १, बुधबार ०९:०२ by Sidharekha Online
नेविसङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदै
काठमाडौं, १ भदौ । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि बुधबार मतदान हुँदैछ। महाधिवेशन उदघाटन भएको १० दिनपछि बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान हुने भएको छ । त्यसको लागि निर्वाचन समितिले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेवि संघमा अध्यक्षसहित १ सय २९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि हुने निर्वाचनमा झन्डै सात सय विद्यार्थी नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । मतदानमा ३ हजार ८ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् । मतदानमा सभापति देउवा र सिटौलाको संयुक्त प्यानलको नेतृत्व नैनसिंह महरले गरेका छन् भने पौडेल पक्षका उमेदवार मनोजमणि आचार्य रहेका छन् । अध्यक्ष उम्मेदवारी दिने अन्य विद्यार्थी नेतामा शुभराम बस्नेत, लक्ष्मण आचार्य, आनन्दराज त्रिपाठी, नगेनसिंह ठकुरी, बचन कार्की रहेका छन् भने पदमराज पन्तले उम्मेदवारी र्